musha AFRAN FOOTBALL STORI Victor Wanyama Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakapedzisira Kugadziriswa pane March 4, 2018
LB inopa Nyaya Yese yeBhodhi Bull iyo inozivikanwa zvikuru nezita reNickname; "The Brute". Our Victor Wanyama Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda zvisingazivikanwi zvishoma nezvake pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva nezvehupenyu hwake seyaKenya wokutanga kuonekwa muLigeria League, asi vashomanana vanoona Victor Wanyama weBio iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Victor Wanyama Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Makore ekutanga
Zita rake rakakwana Victor Mugubi Wanyama. Akazvarwa musi we 25th waJune 1991 muNairobi, Kenya. Akaberekerwa nevabereki varombo, (Mr naVaWanyama) avo vakazowana mukana mune zvemitambo.
Pasinei nokuva nehutano hwehuduku hunotanga, Victor paaikwira aingova mwanawo zvake uyo aive akazivikanwa neAfrica "Cha baba na cha mama" AKA "Amai uye Papa Play" kufanana neshamwari dzake dzose dzevana. Akapfuura nematambudziko akawanda achikura. Severally, Victor akadzingwa kumba kuti awane mari yechikoro uye dzimwe nguva aizoenda asina kudya kwemazuva.
Muchida chekuita zvinhu zvakashata, akatanga kutengesa nekutengesa zvishoma kuti kuchengetedza muviri nemweya zvakanyatsogadzikana. Dzimwe nguva mumigwagwa, aizozviona achiona zvikwata zvemhosva zvichitsvakwa nePurisa.
Pfungwa yebhola yakauya apo yakatariswa uye ichiyemura Patrick Viera yebhokisi mauto ane simba pamutambo wekutamba. Izvi zvakauyawo shure kwehanzvadzi yake huru uye mushure mokunge mutevedzeri wemutambo McDonald Mariga akamukurudzira kupa bhora chiedza. Achifunga kuti akanga achivandudza muviri wakafanana wakavakirwa kuna Patrick Viera uyo ari shure kwevaKenya, Victor akasarudza kupa bhora kuedza nevabereki vake vachimutsigira pasi pemamiriro ezvinhu ekuti anofanira kupedza chikoro chake chesekondari. Pasinei nemukoma wake mukuru anotanga kupinda mubhola, vabereki vake vakatenda kuti basa rakanga risina ramangwana uye rakavimbiswa munyika.
Vanyama pavakagamuchira mazano kubva kuvabereki vake uye nemari yehama yavo vakapfuurira kupinda Kamukunji High School, iyo inoita kuti tambo yebhola iri kubudirira. Paakasiya Chikoro chesekondari, akatambawo neJMJ Academy kwemakore matatu panguva iyo zvakare akabatana neKenyan Premier League clubs Nairobi City Stars.
Victor Wanyama Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Chishamiso
Chishamiso chakatanga kusvika kumhuri yake apo Wanyama mukuru mukoma McDonald Mariga akacherechedzwa nevaScott scouts vakamutora kuti atambe kuSweden club Helsingborg. McDonald aiva nemadziro akafanana nemukoma wake, Victor uye club yavo yeSweden vaida. Pasi apa musiyano uripo pakati paVictor (kuruboshwe) uye mukoma wake mukuru (akafananidzira kurudyi).
Mushure mekunge vasati vatora nzvimbo yaMic Donald, uye vachizoziviswa nezvezvingaita Victor Wanyama zvakare muKenya, vakatumira vashori kuti vauye kuzomutora kuKenya.
Victor Wanyama akatanga kutamira kuEurope akauya mu2007 paakazobatana neSweden club Helsingborg mu2007 apo munun'una wake, McDonald Mariga akatevedza bhora. Mushure mekubuda kwehama yake McDonald Mariga kusvika sarja A divi Parma muZ2008, Wanyama akadzokera kuKenya kwechinguva chiduku. Munguva iyi, kutora kwake kwaitangwa kuBerchocho AC yeBelgian League. Akagara imomo kwemaviri maviri asati ashanyira kumaScottish giants, Celtics.
Wanyama akauya kuCeltic sechinhu chisingazivikanwi. Bhodhi rekutanga raive richigadzirisa mumakore akapfuura kubva kuunza 'varume vesimbi' vaifanira kugovera rutivi rwezvimwe zvikwereti uye kuita kuti zvimwe kutya zvive muvanopikisa.
Kurova pasi kunofamba, Wanyama akapinda muchikwata cheCeltic chakanga chatotopiswa nevari pakati pevamwe vanhu vachishamisika kuti nei akatengwa. Kubvira pakutanga, akazotora midzi uye pane imwe pfungwa kufunga nezvekutamira kune rimwe divi rinozivikanwa. Mushure mokufungidzira kukuru uye kuparara kwakapfuura kwehurukuro, pana 11 July 2013, Wanyama akasainira Premier League neSouthampton pamubhadharo aiti ane £ 12.5 mamiriyoni, zvichimuita iye weKenya wokutanga kutamba muItaly League. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Victor Wanyama Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Relationship Life
Victor Wanyama murume anotenda zvechokwadi uye anoziva kupi kuti awane rudo.
Vose veKenya vakabvumirana rudo pakati pomutauriri weKenani uye Tracy Macniven. Sezvazvinowanzotaurwa, vose vanodikanwa vanofanana zvakakwana kune mumwe nemumwe.
Tracy mudzimai akanaka kwazvo. Iye muenzaniso we "Nywele Creative" iyo inobatanidza nevhudzi remvere uye nekuwedzera. Akamboisa chinyorwa pamwe chete neinoita selovestruck muteja. Mashoko anotevera akazotevera akaisa pfungwa yekuzorora.
Mhinduro kubva kune vateveri vavo yaisanganisira imwe iyo yakatsigira ukama hwavo hwakanga huri kwegore uye imwe yakavakurudzira "Waroora zvekare" achiti "Imi varume muri vakaroorana vakanaka chaizvo izvo zvave zvakapfuura gore zvino!" Inongova nyaya yenguva nguva Victor asati agara pasi.
Victor Wanyama Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Personal Life
Victor Wanyanma ane izvo zvinotevera hunhu hwake.
Victor Wanyama's Strengths: Iye ane simba, ane simba, anonyatsofungidzira, akavimbika, ane tsitsi, anonzwira tsitsi, anonyengetedza.
Utera hwaVictor Wanyama: Anogona kuva Moody, kusava nechokwadi uye kusafungira.
Zvakaitwa naVa Victor Wanyama: Anofarira PlayStation, Eating Chicken, hupenyu hwekunze, gorofu, kumba-based hobbies, kunonoka pedyo kana mumvura, kubatsira vanodiwa, kudya kwakanaka neshamwari
Zvisikwa zvipenyu zveVanyama: Vatorwa, kutarisa mafirimu, chero kutsoropodza kwaamai vake nekuzarura hupenyu hwehupenyu hwega
Muchidimbu, Wanyama anonyatsonzwa uye ane tsitsi. Anokwanisa kunge anonzwira tsitsi uye akabatanidzwa nevanhu vanoramba vari pedyo. Wanyama yakavimbika kwazvo kunyika yekwake inomuda uye vana vake.
Victor Wanyama Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Mhuri
Pakutanga, vabereki vake vakanga vasina kunaka. Nhau yavo yakachinja apo vanakomana vavo vakatanga kuitora muEurope. Nokudaro, vakava mhuri yemitambo. Kunyange zvazvo munun'una waVictor McDonald Mariga ariwo mutambi wenhau, vamwe vanun'una vake Thomas naSyvester Wanyama vanewo mavheti muKenya Premier League sezvavakaita panguva yekunyora.
Achishamisika, baba vaVictor Wanyama, Noa Wanyama (mifananidzo iri pasi apa), akambova mutambo weAcc Leopards muZ1980s. Noa haana kumbozviita mumutambo.
Noa anotarisa mumwe murombo akamuita kuti atambudzike nevashandi vekuchengeteka munguva yeKenya yakashamwaridzana neRDC.
SISTER NAAI: Imwe hanzvadzi yaWanyama Mercy ichangobva kuva muchengeti webhasiki muU.SA. Wanyama anoda amai vake vanoratidzwa pasi apa zvikuru. Anofunga kuti iye ndiye chinhu chakanakisisa chakanga chaitika kwaari muupenyu hwake hwose. Pasi pane mufananidzo waamai vaVictor Wanyama nahanzvadzi.
HANZVADZI KONAMA: Imbwa yakakonzerwa nekukuvadzwa kunoramba kuripo kwakamukuvadza zvikuru munguva ichangopfuura, uyo aimbova mutambi wenyika yeKenya McDonald Mariga anofara zvikuru kuti atange kukura mumamiriro ekunze kwemukoma wake Victor Wanyama.
Zvinoshamisa, nepo Mariga's career iri pachena yakasvibiswa mumakwikwi ezasi echikwata cheItaly, Wanyama ari kunakidzwa nekunakisisa yebhola muEngland. Mariga ihama ine hanya. Mumashoko ake pamusoro pemhuri yake ...
"Mhuri yedu iri pedyo zvikuru. Amai nababa vangu vakatiita kuti tive pedyo, " Mariga akati. "Kukura, vakati, 'Ini ndine rubatsiro, hama yangu, zvakawanda'. Taizotamba mutambo pamwe chete uye chikoro, Ndinopedzisa kutanga nekumirira Victor saka tinogona kuenda kumba pamwechete - zvinhu zvakadai. Dzimwe nguva ndinenge ndichitamba uye ndinotarira mumwe munhu achikandira mukoma wangu. Apo zvakaitika, Ini vanonzwa vakashata uye dzimwe nguva vachirwa kuti vasiye, " MAriga zvakare akazarura munyeve dzisinganzwisisiki yekuti muchengeti wehama yake aive akawanda sei. Zvinopfuura makore gumi kubva Mariga akatanga kutora Wanyama pasi pemapapiro ake.
Victor Wanyama Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Mugwagwa Kunyora Kurwisana
Pane imwe nguva yapfuura, Wanyama airemekedzwa muTanzania mushure mekunge mumigwagwa uchitumidzwa zita rake mushure meDar es Salaam.
Zvisinei, kufamba kwacho, zvakadaro, kwakapesana nharo mushure mokunge chiratidzo chemugwagwa chaiva nezita rake chakanga chakatorwa.
Victor Wanyama Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Favorite Quote
"Manzwiro andakawana mushure mechikwata chaipikisana neBarcelona chakanga chisingatendi! Handina kumbobvira ndanzwa chinhu chakadaro muhupenyu hwangu. Yakanga iri nani kudarika zvepabonde. Hatina kupemberera kukunda nenzira ipi zvayo. Ndainwa juisi yemarangi, iyo yakanga yakakwana. "
Wanyama kuenda kupepanhau reBelgium Het Nieuwsblad mushure mekukunda kwe 2-1 v Barcelona (akawana chinangwa) (Nov 2012)
"Ndakaita chisarudzo chakanaka chokubatana neCelt. Icho chikwata chemhuri, pandinogona kukura nenzira yakanakisisa. Ndiri kufara kuCeltic. "
Victor Wanyama Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Rage
Victor Wanyama dzimwe nguva haanzwisisi Uchenjeri kuti azive paanenge achifanira kuita chikamu chitsvuku / yellow chikamu kunyanya munzvimbo yekuchengetedza hasha dzake.
Victor Wanyama Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Mharidzo KuKenya Vana
Uye Jehovha aive nemharidzo kune chero vana vanorota kuwedzera kwakadaro. Akawedzera kuti: "Zvino pane zvakawanda zvevamwe vana vachiona iyo Premier League paTV vachivimba kuti vanogona kuva pano pavanokura. Ndinofunga kuti ndakaisa muenzaniso wakanaka uye ndakazviratidza kuti zvinogona kuitika. Apo ini ndichienda ikoko ndinoedza kukurudzira vana vaduku ndovaudza kuti vatende uye vashande zvakaoma kuitira kuti kurota kwavo kuite muLigeria League zvingaitika. Vanofanira bIva mukati mako sechinhu chipi zvacho chingaitwa. "
Victor Wanyama Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: An Actor
Muna 2015, Wanyama vakabatanidzwa mukugadzirwa kwefirimu pfupi pamusoro pebhokisi muKenya yakadanwa Mdudu Boy, yakanyorwa uye yakatungamirirwa nemusikisikadzi Ella Smith.
Uyezve, ave ari mutambi wokutanga mufirimu pfupi "Shumba yeMuthurwa". Iyi ndiyo firimu inokurudzira pamusoro parwendo rwake rwebhora kubva pamatumba kusvika kumatambo emabhodhi emarudzi ose.
Munguva pfupi yapfuura, Wanyama ane vakabatanidzwa mukugadzirwa kwefirimu pfupi nezvebhokisi muKenya inonzi Mududu Boy, yakanyorwa uye yakatungamirirwa actress Ella Smith.
Mumazuva ake paCeltic FC, Wanyama akatsigira Celtic Charity Funds, ruoko rwechipo rweCeltic FC kushanyira Kenya. Rudo rwunozvipira kutsigira ramie migumisiro yekubatsira muAfrica.
Uye anotarisira rwendo rwake kubva kumucheto kweNairobi kusvika kumusoro-kumhanya kweChirungu yebhokisi inogona kukurudzira vamwe vana.
CHOKWADI KUTI: Tinokutendai nekuverenga Victor Wanyama Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Felix Oino Mbudzi 21, 2018 Pa 2: 21 pm
Comment: Wanyama Ndiye Mukwata Wakaisvonaka uye isu VaKean Vane Proud Of Him.May Blez Iye Sezvaanotikurudzira neGvng Us Motvational Support 2wadz Rchng Him.Congratz Bro Vicky.2ko Back Yako Sie Mayouthz Wa Kenya.Kp Kutufungulia Njia Wth Tym Tuunde Kenya Ndogo Ktk City of Zimbabwe.
Bendict lando June 23, 2019 Pa 7: 05 pm
Congratulations Wanyama nekuda kwekuzvipira iwe pachako Nyika yedu yakakura kuWanyama